कसरी सुरु भयो सिरिया युद्द ? कुन देशको के स्वार्थ छ यो युद्दमा ? यो निकै दुखद र हिर्दयविदारक यी फोटोहरु सहित पुरा विवरण हेरी शेयर गर्नुहोस् ! - HNB News
कसरी सुरु भयो सिरिया युद्द ? कुन देशको के स्वार्थ छ यो युद्दमा ? यो निकै दुखद र हिर्दयविदारक यी फोटोहरु सहित पुरा विवरण हेरी शेयर गर्नुहोस् !
अरब स्प्रिङबाट प्रेरित भएर सन् २०११ को मार्चमा पश्चिम सिटी डेरामा प्रजातन्त्रको पक्षमा आन्दोलनहरु चर्कन थाले । तर, सानो आगोको झिल्का देशभर फैलन समय लागेन ।
सरकारले आन्दोलन दबाउन ठुलो शक्ति प्रयोग गरेपछि सिरियाका जनता सबै सडकमा उत्रिन थाले । उनीहरुले राष्ट्रपतिको राजिनामा माग गरिरहेका थिए भने अर्को तर्फ बसर आफ्नो पद जोगाउन राजनीतिक खेलमा व्यस्त देखिन्थे । आन्दोलनले कडा रुप लिन थालेपछि विपक्षी समर्थकहरुले हतियारको सहारा लिन थाले । सुरुमा त हतियार आत्मरक्षाका लागि प्रयोग गरियो तर, पछि यसको प्रयोग सुरक्षा फौजहरुलाई आफ्नो क्षेत्रबाट भगाउन प्रयोग गर्न थालियो ।
१० प्रतिशत शरणार्थीहरु सुरक्षीत रुपमा युरोप पुगेका थिए ६३ लाख सिरियाली जनता भने बेघर भएका छन् । ८५ प्रतिशत सिरियाली जनता गरिबीको रेखामुनि Source: Medianp Tv
Tags: Syria bomb blast
Previous होलीमा जथाभावी लोला हान्ने र रंग लगाउनेलाई प्रहरीले बनायो यस्तो कडा नियम
Next नेपालले यूएईलाई हरायो, ललितले लिए ४ विकेट